Fibromyalgia နှင့်ခြေထောက်ကြွက်တက် အကြောင်းရင်း, Self- တိုင်းတာခြင်း, ကုသမှုနှင့်လေ့ကျင့်ခန်း
11 / 01 / 2021 /i Fibromyalgia, ဒူလာ /av ရေတံခွန်
သင်ခြေထောက်ကြွက်တက်ခြင်းခံစားနေရပါသလား fibromyalgia ရှိသူများသည်ခြေထောက်ကြွက်တက်ခြင်းဖြစ်ပွားမှုပိုမိုများပြားကြောင်းသုတေသနများကပြသခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါး၌ fibromyalgia နှင့်ခြေထောက်ကြွက်တက်ခြင်းတို့၏ဆက်စပ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်လေ့လာပါမည်။
သုတေသနက၎င်းကို fibromyalgia နာကျင်မှုအမျိုးအစားနှင့်ဆက်စပ်ပေးသည် hyperalgesia (1). နာတာရှည်ရောဂါသည်ဤနာတာရှည်နာကျင်မှုအခြေအနေတွင်ပိုမိုနာကျင်မှုရှိကြောင်းကိုလည်းအစောပိုင်းကသိရှိခဲ့ရသည်။ စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုတစ်ခုကဒီလူနာအုပ်စုမှာရှိတဲ့ ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်၏အလွန်အကျွံလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် (ဖော်ပြသည်)2).
ကောင်းမွန်သောနှင့်မြန်ဆန်သောအကြံပေးချက်များ - ဆောင်းပါး၏အောက်ခြေတွင်ခြေထောက်နာကျင်မှုအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုဗီဒီယိုကြည့်နိုင်သည်။ ငါတို့သည်လည်း (ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့) မိမိကိုယ်ကိုအစီအမံအပေါ်အကြံပေးချက်များသည် နွားသငယ်ကိုချုံ့ခြေအိတ် og plantar fasciitis ချုံ့ခြေအိတ်) နှင့် စူပါမဂ္ဂနီစီယမ်။ link အသစ်တစ်ခုကိုပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်။
Hyperalgesia နှင့် Fibromyalgia
Fibromyalgia နှင့် Leg cramps အကြားဆက်သွယ်မှု
ခြေထောက်ကြွက်တက်ခြင်းလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်း (ဗီဒီယိုအပါအ ၀ င်)
နေ့ရောညပါခြေထောက်ကြွက်တက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အသုံးအများဆုံးမှာအိပ်ရာဝင်ပြီးနောက်ညတွင်ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။ ကြွက်သားအတွင်းကြွက်သားများကြွက်တက်ခြင်းသည်နွားသငယ်ကြွက်သားများအားမဆုတ်မနစ်သော၊ ကြွက်တက်ခြင်းသည်ကြွက်သားအုပ်စုတစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်နွားသငယ်ကြွက်သားတစ်မျိုးလုံးကိုသာသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဖြစ်စဉ်များသည်စက္ကန့်မှမိနစ်အနည်းငယ်အထိကြာသည်။ ပါ ၀ င်သည့်ကြွက်သားကိုထိသည့်အခါ၎င်းသည်ဖိအားအလွန်များပြီးအလွန်တင်းမာနေသည်ကိုသင်ခံစားနိုင်လိမ့်မည်။
ထိုကဲ့သို့သောဖမ်းဆီးရမိအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းတရားများရှိနိုင်ပါသည်။ ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ (မဂ္ဂနီစီယမ်အပါအဝင်) Electrolytes များ၊ အလွန်အကျွံမသန်စွမ်းသောနွားသငယ်ကြွက်သားများနှင့် hyperactive အာရုံကြောများ (fibromyalgia ကဲ့သို့) နောက်ကျောတွင်ရှိသောအာရုံကြောများညှစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အိပ်ရာမဝင်ခင်နွားသငယ်ကြွက်သားများကိုဆန့်ထုတ်သည့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရှိခြင်းသည်ဖြစ်ပွားမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ကဲ့သို့သောအခြားအစီအမံ ချုံ့ခြေအိတ် ထို့အပြင်ထိုဒေသတွင်သွေးလည်ပတ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့အသုံးဝင်သောအတိုင်းအတာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် - ထို့ကြောင့်သိမ်းယူမှုကိုကာကွယ်တားဆီး။link အသစ်တစ်ခုကိုပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်).
ဆောင်းပါး၏နိဒါန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် fibromyalgia ကြောင့်ထိခိုက်သောသူများ၏အာရုံကြောစနစ်တွင်အလွန်အကျွံလုပ်ဆောင်မှုကိုပြသခဲ့သည်။1, 2). ပို၍ တိကျစွာဆိုလိုသည်မှာအရံအာရုံကြောစနစ်သည်အလွန်များပြားသောနှင့်ပြင်းထန်သောအချက်ပြမှုများကိုထုတ်လွှတ်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအနားယူခြင်းအလားအလာ (အာရုံကြောတွင်လုပ်ဆောင်မှု၏အချိုးအစား) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါကြောင့်လည်းနာကျင်မှုအနက်များအတွက်ဗဟိုကြောင်းမြင်ကြပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့် ဦး နှောက်တွင် "နာကျင်မှုစစ်ထုတ်ခြင်း" တစ်ခုတည်းမရှိပါ, fibromyalgia နှင့်အတူသူများအတွက်, နာကျင်မှု၏ပြင်းထန်မှုကိုလည်းပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။
ထို့အပြင် fibromyalgia ရှိသူများအတွက်အလွန်အမင်းအာရုံကြောစနစ်သည်ကြွက်သားများရှိအမှားအချက်ပြမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလှည့်ကျအတင်းအကြပ်ကျုံ့ခြင်းနှင့်ကျဉ်းကျုတ်စေနိုင်သည်။
ခြေထောက်ကြွက်တက်ခြင်းနှင့် Fibromyalgia အကြားဆက်သွယ်မှု
ထို့ကြောင့် fibromyalgia ရှိသူများသည်ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုပိုမိုမြင့်မားလာပြီး 'hyperactive' peripheral nervous system 'လည်းရှိသည်။ ဤသည်ကြွက်သားချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်ကြွက်သားကြွက်တက်စေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ fibromyalgia နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအခြေအနေများကိုပိုမိုလေ့လာပါက - စိတ်တိုအူသိမ်အူမရောဂါ ဒါဆိုကြွက်သားချောင်းဆိုးခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာငါတို့တွေ့ပြီ ကြွက်သားများ။ ၎င်းသည်အရိုးကြွက်သားနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကြွက်သားအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုခန္ဓာကိုယ်၏အူသိမ်အင်္ဂါများ (ဥပမာအူကဲ့သို့) တွင်တွေ့ရှိသည်။ ဤကြွက်သားအမျှင်အမျိုးအစားတွင်အလွန်အမင်းလှုပ်ရှားခြင်းကခြေထောက်ရှိကြွက်သားများကဲ့သို့မလိုအပ်သောကျုံ့ခြင်းနှင့်အမျက်ဒေါသထွက်စေနိုင်သည်။
fibromyalgia ရှိသူတစ် ဦး သည်ခြေထောက်တွင်ပုံမှန်ကြွက်သားများကိုပုံမှန်လည်ပတ်စေရန်အတွက်သွေးလည်ပတ်မှုပိုမိုလိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုမြင့်မားခြင်းကသွေးစီးဆင်းမှုတွင် electrolytes များရရှိမှုကိုမြင့်မားသောတောင်းဆိုမှုများဖြစ်သောကြောင့်မဂ္ဂနီစီယမ် (စူပါမဂ္ဂနီစီယမ်အကြောင်းပိုမိုဖတ်ရှုရန်) ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီမှာ) နှင့်ကယ်လစီယမ်။ ထို့ကြောင့်အများအပြားကခြေထောက်ကြွက်တက်ခြင်းကိုပေါင်းစပ်ထားကြောင်းအစီရင်ခံကြသည် နွားသငယ်ကိုချုံ့ခြေအိတ် နှင့်မဂ္ဂနီစီယမ်။ မဂ္ဂနီစီယမ်ကိုတွေ့ရှိနိုင်သည် မှုန်ရေမွှားပုံစံ (ထိုနွားသငယ်ကြွက်သားများသို့တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားသည်) သို့မဟုတ်တက်ဘလက်ပုံစံ (စ၌လည်း) ကယ်လစီယမ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်).
မဂ္ဂနီစီယမ်သည်သင်၏တင်းမာနေသည့်ကြွက်သားများကိုအေးဆေးစေနိုင်သည်။ ချုံ့သောခြေအိတ်များအသုံးပြုခြင်းသည်စောင်ရေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးသည်။ သို့မှသာကြွက်သားများတင်းကျပ်။ ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်အသုံးပြုခြင်း နွားသငယ်ကိုချုံ့ခြေအိတ် (ခြေထောက်ကြွက်တက်ခြင်းကိုထိရောက်စွာ)
နေ့စဉ်အသုံးပြုခြင်း Plantar Fascite ချုံ့ခြေအိတ် (သင်ခြေလျင်ကြွက်တက်ခြင်းကြောင့်နှောင့်ယှက်ခံရလျှင်)
ခြေထောက်ကြွက်တက်ခြင်းအတွက်ထိရောက်သောကုသမှုနည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ အခြားအရာများအပြင်ကြွက်သားနှင့်အနှိပ်သည်သက်သောင့်သက်သာရှိစေပြီးကြွက်သားများကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လျှော့ချနိုင်သည်။ ပိုမိုရေရှည်နှင့်ရှုပ်ထွေးသောပြproblemsနာများအတွက်၊ Shockwave ကုထုံး မှန်ကန်သောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါစေ။ ဤသည်သည်ခြေထောက်ကြွက်တက်ခြင်းကိုကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူအလွန်ခေတ်မီကုသမှုပုံစံဖြစ်သည်။ ခြေလက်များနှင့်ခြေထောက်တွင်ရှိသောပြtoနာများကိုဖြစ်စေသောနောက်ဖက်တွင်အာရုံကြောများယားယံခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုသံသယရှိနိုင်လျှင်၎င်းကုသမှုကိုတင်ပါးနှင့်နောက်ဖက်ကိုပူးတွဲစည်းရုံးခြင်းနှင့်တွဲဖက်လေ့ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆေးခန်းတစ်ခုတွင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကုသခြင်းများပြုလုပ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်။
ခြေထောက်များ၊ ခြေဆစ်များနှင့်ခြေထောက်များကိုခိုင်မာစေသည့်လေ့ကျင့်ခန်းများကခြေထောက်အောက်ပိုင်းသွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားပိုမိုသော elastic နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကြွက်သားများရရှိရန်ကူညီနိုင်သည်။ ထုံးစံအတိုင်းအိမ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုသင်၏ဇီဝကမ္မကုထုံး၊
အောက်ပါဗီဒီယိုတွင်ခြေထောက်ကြွက်တက်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ပရိုဂရမ်ကိုအခြားအရာဟုခေါ်ဝေါ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသော်လည်း၎င်းသည်ခြေကျင်းတွင်နာကျင်မှုကိုကာကွယ်ရန်အထောက်အကူပြုသည့်အချက်ကိုအပိုဆုအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ သင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်ဟုသင်ထင်သောမေးခွန်းများရှိပါကဤဆောင်းပါး၏အောက်ရှိမှတ်ချက်များအပိုင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ Youtube ချန်နယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ဗွီဒီယို - ခြေရာများ၌နာကျင်မှုမှလေ့ကျင့်ခန်း ၅
မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါ။ အခမဲ့ရယူရန်အခမဲ့ခံစားရသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Youtube ချန်နယ်တွင် (ဤတွင်နှိပ်ပါ).
1. Sluka et al, fibromyalgia ၏ 2016 Neurobiology နှင့်နာတာရှည်ကျယ်ပြန့်နာကျင်မှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ Volume ကို 338, ဒီဇင်ဘာလ 3, 2016, စာမျက်နှာ 114-129 ။
2. Bordoni et al, 2020. ကြွက်သားကြွက်တက်။ ရေတံခွန်။ Treasure Island (FL): StatPearls ထုတ်ဝေမှု၊ 2020 ဇန်နဝါရီ။
https://www.vondt.net/wp-content/uploads/vondt-i-leggen.jpg 349 700 ရေတံခွန် https://www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png ရေတံခွန်2021-01-11 19:51:182021-01-11 19:51:18Fibromyalgia နှင့်ခြေထောက်ကြွက်တက်
Fibromyalgia နှင့် Plantar Fascitis WOMAC (လက်တွေ့တင်ပါးနှင့်ဒူးအရိုးအဆစ်ရောင်နာကိုယ်တိုင်ဆန်းစစ်ခြင်းမေးခွန်းလွှာ)